My freedom: Easy Homemade Ice-cream
Easy Homemade Ice-cream
မနေ့ကတည်းက ဒီပိုစ့်တင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာ ဓာတ်ပုံရွေးတာ၊ ပြင်တာနဲ့တင် အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ခဏနေဆိုလည်း လေဆိပ်မှာ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးကို သွားကြိုရမယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဒါတင်မယ်ဆို တင်ရမှ ကျေနပ်တာဆိုတော့ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီးပြီး ရေးရမယ် ဟိုက် ရားးးး (အရှိန်ယူတာ xD)။ ဒီနေ့ ကန်ဒီပြောပြမှာက အရမ်း အရမ်းးးးလွယ်တဲ့ ရေခဲမုန့်လုပ်နည်း ^_^
ဒီလုပ်နည်းလေးကို ကန်ဒီ YouTube မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်း တွေ့တာဆိုတော့ Credit ပေးဖို့ဆို ပြန်မရှာတတ်တော့ဘူး (>.<)။ အဓိကလိုအပ်တာက ငှက်ပျောသီးနဲ့ Peanut Butter ပဲ။ စတော်ဘယ်ရီက ကန်ဒီကြိုက်လို့ သက်သက်ထည့်တာ :D
ပထမဆုံး ငှက်ပျောသီးကို အတုံးလေးတွေလှီးပြီး ရေခဲသေတ္တာခဲခန်းထဲ ထည့်ထားနော်။ သူတို့ခဲပြီးဆိုမှ Peanut Butter ရယ်၊ ငှက်ပျောသီးတွေရယ်ကို ရောပြီး Blender နဲ့ မွှေလိုက်ရုံပဲ။ ကန်ဒီအဲ့လိုလုပ်တော့ ငှက်ပျောသီးတွေက အရမ်းခဲနေပြီး မွှေရတော်တော်ခက်တယ်။ သူတို့မြန်မြန်ပျော်အောင် ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်ရသေးတယ်။
ဒါက မွှေပြီးပြီးချင်း အနေအထား... အရည်ပျော်ချင်နေပြီ >.<
ကန်ဒီစဉ်းစားတာ နောက်တစ်ခါလုပ်ရင် ငှက်ပျောသီးတွေနဲ့ Peanut Butter ကို အရင်မွှေ... ပြီးမှ ရေခဲသေတ္တာခဲခန်းထဲပြန်ထည့်ပြီးစား... အဲ့ဒါဆို Blender နဲ့ မွှေလို့ပိုကောင်းမလားလို့။ အဲ့လိုလုပ်ရင် ချက်ချင်းတော့ စားလို့မရဘူးပေါ့။ သူလုပ်တဲ့နည်းကတော့ မွှေပြီးရင်တောင် အအေးဓာတ်လေးနည်းနည်းရှိနေသေးတော့ စားချင်ရင် စားလို့ရတယ်။ ကန်ဒီကတော့ တစ်ခါတည်း အကုန်မစားနိုင်လို့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ပြန်ထည့်ပြီးမှ စားတယ် :D
ရေခဲသေတ္တာခဲခန်းထဲ ထည့်ထားပြီး အနေအထား ^_^
ပိုတဲ့စတော်ဘယ်ရီနဲ့ ငှက်ပျောသီးကို Yogurt ထည့်ပြီး ကန်ဒီဟိုတစ်ခါလုပ်ဖူးတဲ့ Smoothie လုပ်သောက်... ဘယ်လောက်မိုက်လဲ?? (:D) နိဂုံးချုပ်ရရင် အဲ့လိုတွေ လျှောက်လုပ်စားနေတာ အရည်ထွက်မတတ် ပျင်းလွန်းလို့ =.='
Posted by Candy at 12:10 PM
ရာသီဥတုက ပူတော့ အဲလိုမျိုးလေးတွေပဲ ခဏခဏစားချင်နေတယ် ညီမလေးရေ...ဒါနဲ့ ကန်ဒီမျက်နှာလေး ဖောင်းနေတာပဲ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်...
ငှက်ပျော်သီး စတော်ဗယ်ရီသီးတွေ မကြိုက်ပေမဲ့
ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်သွားတယ် ညီမလေး။
တီတင့် စလုံးရောက်တဲ့အခါ ကန်ဒီလေးပျင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းရမယ်... ဒါမှ Homemade Ice-cream စားရကံကြုံမှာလေ :P
You Tube က ကန်ဒီလေးရဲ့ လက်ဦးဆရာပေါ့ :)
ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးကို သွားကြိုရမယ်ဆိုလို့ မျက်စိလည်ချင်စရာကောင်းတဲ့ ချိန်ဂီအဲ(ယား)ပို့တ်ကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ်။
တီတင့်ပြောသလို ဘုန်းတောက် စလုံးရောက်တဲ့အခါ ပိစိပျင်းတဲ့အချိန်နဲ့ တိုးပါစေ...
I want to have this after lunch ;P
ကန်ဒီလေးက ဒါလည်း ဖြစ်တာပဲ ... ရေခဲမုန့်ကိုကြည့်ပြီး သွားရေကျသွားတယ် ... လုပ်နည်းတော့ မှတ်သွားတယ် ... အပျင်းမတစ်ရင် လုပ်စားဖြစ်လောက်တယ် ... :P
ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန် သည်ဆိုဒ်ကိုဝင်ကြည့်မိတာ မှားပြီထင်တယ် သရေကျစရာတွေချည်းပဲ
မမချိုချဉ် နွေရာသီအအေးဆိုင်ဖွင့်ပါလား တော်တော်ရောင်းကောင်းမှာ :P
မရောက်တာကြာလို့အလည်လာရင်းစာတွေဖတ်သွားတယ်နော် မရောက်တာကြာပေမဲ့ ရောက်လာပြန်တော့လည်း အရင်တုန်းကလိုပျော်စရာကောင်းတယ် မမချိုချဉ်ဆီလာလည်ရတာ
Be Healthy: Diet and Fitness
Facts About Me!!